कोरोना नेगेटिभ भएकी मलाई त यस्तो व्यवहार, पोजेटिभ हुनेलाई कस्तो होला ?
२०७८ माघ ०२ आइतबार
# स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
# चिकित्सा शिक्षा आयोग
# डा. गुणराज लोहनी
# काेराेना अपडेट
शर्मालाई कारबाही नगरे आन्दोलन थप सशक्त बनाउने विद्यार्थीको चेतावनी
एमाले नेता भण्डारी कोरोना संक्रमित
दुई डोज खोप लगाएकी महिलाको ओमीक्रोनबाट मृत्यु
ओमीक्रोन लहरमा अस्पताल भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या बढी !
बेइजिङमा पहिलोपटक भेटियो समुदाय स्तरमै ओमीक्रोन संक्रमण
आजदेखि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज, क-कसले पाउँछन् ?
जेष्ठ ०९, २०७७ १८:२१ मा प्रकाशित
म सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा स्टाफ नर्सको रुपमा कार्यरत छु । अहिले भक्तपुर जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा छु। हाल ममा कोरोना भाइरसको संक्रमण छैन । एक रात मसँगै बसेकी साथीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि म क्वारेन्टाइनमा बसेको हुँ। संक्रमित मेरी साथी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि हिजै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेकी छिन्।
मेरो चाँही भाइरस संक्रमण देखिनसक्ने समय (इन्क्यूवेसन पिरियड) बाँकी रहेकाले म आइसोलेसनमै छु । म मेडिकल क्षेत्रकै व्यक्ति भएपनि अचम्मको अनुभव भइरहेको छ। मलाई पनि कोरोना पोजेटिभ भएको भन्ने हल्ला भइसकेको रहेछ । समाजले साँच्चिकै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने रहेछन् । मलाई देख्नेवित्तिकै सबैले मुखामुख गरेर हेर्नथाले ।
मेरी साथी सुनसरीबाट आएकी थिइन् । उनी ललितपुरको एक अस्पतालमा कार्यरत छिन् । उनी सुनसरीबाट सिधै टेकु अस्पताल गएर कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएर मेरो कोठामा आएकी थिइन्। मैले साथीलाई कसरी नआइज भन्नु, मेरो नैतिकताले पनि नदिने भएकाले हुन्छ आउ भने । हामीसँगै बस्यौँ । भोलिपल्ट राति साढे ९ बजेतिर साथीलाई टेकुबाट फोन आयो, तपाईको रिपोर्ट पोजेटिभ देखियो, आफैँ आउनुहुन्छ कि लिन आउनपर्छ ? भनियो । हामी त बोल्नै सकेनौं । कल्पना नै नगरेको कुरा । कुनै लक्षण देखिएको थिएन । अस्पतालमा काम गर्ने अनि उपत्यका बाहिरबाट आएकाले भनी एकपटक परीक्षण गराउन त भनेर गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आयोे ।
टेकुबाट फोन आएपछि मैले आफू कार्यरत अस्पतालमा यसबारे जानकारी गराँए । हामी सामानहरु प्याक गरेर तयारी भएर बस्यौँ । लिनलाई एम्बुलेन्स आयो। आफू डेरामा बस्ने घरअगाडि नै एम्बुलेन्स आउँदा के–के न भयो जसरी खैलाबैला मच्चिन्छ भनरे मैले अलि परै एम्बुलेन्स रोक्न लगाँए र साथीलाई एम्बुलेन्ससम्म पुर्‍याएँ । साथीको आँखाभरि आँसु थियो । उनी म पनि सँगै गइदिए हुन्थ्यो जसरी डराउदै बोलिरहेकी थिइन् । एम्बुलेन्स रोकेको स्थानमा सबैले छतबाट हेरिरहेका थिए ।
मलाई कस्तो–कस्तो महसुस भयो। ठूलो अपराध गरेकोजस्तै झल्किने दृश्य थियो त्यो । लाइन लागेर हेरिरने कसैले पनि पीर नगर नानी केहीे भएको छैन, भएपनि ठीक भइहाल्छ भन्न सकेनन् ।
हौसला दिन सकेनन् । बरु कराए। तराईबाट आएको भन्दाभन्दै किन साथीलाई राखेको ? भनेर गाली गरे। तारम्तार फोन आएको आयै गर्‍यो । मैले त मेरी साथीलाई सहयोग न गरेको हो । साथीलाई टेकु अस्पताल लगियो भने मलाई भक्तपुर जिल्ला अस्पताल ।
स्वाब लिएर फर्किसकेपछि पनि डर लागिरह्यो । नेगेटिभ हुँदा त मलाई हेर्ने दृष्टिकोण यति नकारात्मक छ भने पोजेटिभ आएमा समाजले के भन्ला भन्ने सोचेर निकै तनाब भयो । म बसेको भवन र कार्यरत अस्पताल सँगै छ। मैले झ्यालबाट हेर्थेँ चिनेको कोही देख्छु कि भनेर । साह्रै गाह्रो भयो । तर मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। अब म पनि केही दिनमा बाहिर निस्कनेछु।
मलाई अस्पतालका सिस्टरहरुले आफूलाई चाहिने समान घरबाट मगाउनुहोस् भन्नुभयो तर मेरो त यहाँ कोही आफन्त पनि थिएनन् मैले एकजना साथीलाई फोन गरेर सामानहरु मगाएँ । सिस्टरहरु भन्नुहुन्छ केही असहज भए खबर गर्नुहोला पानी चाहिए भन्नुहोला अनि ढोकामा ल्याइदिनुहुन्छ । मलाई यहाँ राम्रो व्यवस्था छ । यस्तो बेला सबैको माया चाहिने रहेछ । मलाई सबैले माया गर्नुभएको छ । सहयोग गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
किन अहिले कोरोनाका बिरामी भन्नेवित्तिकै यतिविधि घृणाको व्यवहार गरिन्छ ? किन यस्तो भइरहेको छ ? मैले पनि बुझेको छैन । यो त एउटा रोग न हो जोसुकैलाई लाग्न सक्छ । यसबाट बच्न सावधानी अपनाउने हो घृणालाई विकास गर्ने होइन । कोरोना लाग्यो भन्दापनि समाजमा पुर्नस्थापना कसरी हुने भन्ने पीरले बिरामीमा अर्काे रोग थपिने डर पो देखेँ मैले । कोरोना संक्रमितलाई एकदमै नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिने गरेको छ।
के यसबाट एकजना दुई जना बिरामी भएका हुन् र ? विश्वका लाखौं मानिस यसको शिकार भइरहेका छन् । लाखौं मानिस निको पनि भएका छन् । त्यसैले अहिले संक्रमितलाई घृणा होइन, माया, हौसला र साथको आवश्यकता छ । भातृत्व र सुसम्बन्धको खाँचो छ । सहज पुर्नस्थापनाको जरुरी छ ।
थपिएका आधा संक्रमित काठमाडौंमा, संक्रमणदर ३५ प्रतिशत पुग्यो
हिजो भन्दा संक्रमितको संख्या घट्यो, मृत्यु बढ्यो
नर्स अनुपमा श्रेष्ठ
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं :१८४५ / ०७६ / ०७७
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : जगन्नाथ ढकाल
सम्पादक : तुलसा घिमिरे
कार्यकारी सम्पादक : केदार गौतम
संवाददाता : सरला अधिकारी
संवाददाता :गोपाल रेग्मी
मल्टिमिडिया : कान्छा राई
प्रबन्धक : सुरेन्द्र लामिछाने
बजार व्यवस्थापक : रोशन रेग्मी
लेखा तथा प्रशासन : सुमन ढकाल
डा. दिपेश कुमार यादव
डा. लक्ष्मी पन्थी
सर्वाधिकार : हेल्थपाटी 2022